Al Mukalla - Gpedia, Your Encyclopedia
Isuduwe: 14°32′N 49°08′E﻿ / ﻿14.533°N 49.133°E﻿ / 14.533; 49.133
Lua error in Module:Location_map at line 502: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/Yemen" does not exist.Location in Yemen
Dhacdaa: 14°32′N 49°08′E﻿ / ﻿14.533°N 49.133°E﻿ / 14.533; 49.133
Was find as fishiner's settlement in
Al Mukalla (Af-Carabi: المكلا Al Mukallā) waa magaalo ku Yemen. Mukalla (Carabi: Mohkall Al Mukallā) waa dekad iyo magaalada caasimadda ee Jabhadda Hadhramaut ee Yemen. Magaaladu waxay ku taallaa qaybta koonfureed ee Carabta oo ku taal Gacanka Cadmeed, dhinaca xeebaha badda Carabta. Mukalla waa 480 kilomitir oo bariga Aden ah oo ah dekedda ugu muhiimsan ee Hadhramaut, oo ah guddoomiyaha ugu weyn Yemen.
Mukalla waa magaalada shanaad ee ugu weyn Yemen, oo leh qiyaastii 300,000 oo qof. Magaaladu waxaa u adeega garoonka diyaaradaha ee Riyan. Tusmo Taariikhda 1.1 Dagaalkii sokeeye ee Yemen 2002 1.1 Dib u soo noqoshada Al Qaacida Taariikhda Mukalla wuxuu ku yaalaa meel aan ka fogeyn "Cane" ama "Qana", oo ah ganacsigii hore ee ganacsiga Hadrami u dhexeeya Hindiya iyo Afrika, oo leh goobo feyl ah oo ka soo jeeda dhulkeeda.
Mukalla waxaa la aasaasay 1035 keli keli keli ah. Meelahan waxay qayb ka ahayd Oman ilaa bartamihii qarnigii 11aad, ka dibna dhulkani wuxuu noqday qayb ka mid ah Yemen.
Waxay ahayd caasimadda Qu'aiti State of Hadhramaut ilaa 1967, markii ay noqotay qayb ka mid ah Koonfurta Yemen. Dawlada Quariiti waxay qayb ka ahayd Mashruuca Bariga Aden ilaa iyo markii la midoobey, lataliyaha rasmiga ah ee Britishka ayaa ku sugnaa Mukalla.
Captain Haines, oo ahaa sarkaal British ah oo baadhitaan ku sameeyay Yemen 1830-kii, ayaa ku tilmaamay Mukalla oo ah magaalo 4500 oo qof oo leh ganacsiyo aad u tiro badan. Sannadkii 1934, safiirkii Britishka ahaa iyo baadigoobka Freya Stark ayaa safarkeeda u bilaabay hareeraha Hadhramaut ee magaalada Mukalla, iyada oo joogtana magaaladaas waxaa lagu qoray buugeeda, Gawaarida Koonfureed ee Carabta. 
Dagaalkii sokeeye ee Yemen
Maqaalka ugu muhiimsan: Dagaalkii sokeeye ee Yamen AQAP waxay martigelisaa tartan ballaaran, oo ku dhex yaal caasimadooda, Mukalla 4-tii March 2016. Intii lagu jiray dagaalkii sokeeye ee Yemen, Abriil 2, 2015, Al-Qaacida ee Jasiiradda Carabta (AQAP) ayaa weerartay xabsiga dhexe, iyaga oo xoraynaya boqollaal maxaabiis ah oo ay ka mid yihiin laba taliye oo ka tirsan saraakiisha sare ee AQAP. Waxay weerareen bangiga dhexe waxayna qaadeen 17 bilyan oo riyaal ah iyo 1 milyan oo doolarka Mareykanka ah ka hor inta aysan gacanta ku dhigin xarunta madaxtooyada ee magaalada. Waxaa la soo wariyay in magaalada oo dhan ay gacanta ku hayaan oo ay qorsheynayaan in ay sameeyaan amar diin ah oo ku yaal gobolka Hadramaut oo ballaaran.  Mukalla wuxuu noqday xaruntii AQAP, iyo caasimadii ay Emirate ku lahayd Yemen ka dib markii ay qaadeen.
Bishii Abriil 2015 Nasser bin Ali al-Ansi ayaa lagu dilay weerar duqayneed oo Maraykan ah oo ka dhacay magaalada, SITE Intelligence Group ayaa sidaas sheegtay.
3dii Noofembar 2015, Cyclone Chapala ayaa ku dhuftay magaalada waxayna burburisay biyaha magaalada. 
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Al_Mukalla&oldid=180921"